I Give My First Love to You ( 2009 ) - မြန်မာစာတန်းထိုး
By Myanmar Asian TV Channel October 07, 2016
ဒီဇာတ်ကားလေးကိုတော့ မင်းသား Masaki Okada နှင့် Japan F4 လို့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ လူသိများတဲ့ ဇာတ်လမ်းတွဲထဲက မင်းသမီး Mao Inoue တို့က ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားပါတယ် ...
ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းကတော့ - တာကူမာ ( Masaki Okada ) ဟာ နှလုံးရောဂါ ဝေဒနာခံစားရသူတယောက်ပါ ... အသက် ၈ နှစ်အရွယ်မှာတင် ဆေးရုံမှာ ဆေးကုသမှုကို ခံယူနေရပြီး ရှောင်ကြဉ်သင့်တာကို ရှောင်ကြဉ်ပြီး ဂရုတစိုက် နေ နေရသူတယောက်ပေါ့ ... တနေ့ ဆေးရုံမှ သူ့ဆရာဝန်ရဲ့ သမီးနဲ့ သူငယ်ချင်း ဖြစ်ခဲ့ပါတယ် ... အသက်ချင်းလဲ ရွယ်တူဆိုတော့ သူငယ်ချင်းသံယောဇဉ်ကနေ ချစ်သူရည်းစား သံယောဇဉ်သို့ ရောက်ခဲ့ကြပါတယ် ... ဆရာဝန်ကလဲ တာကူမာ ကို အသက်နှစ်ဆယ်မရောက်ဘူးလို့ ခန့်မှန်းထားပါတယ် ... နှလုံးအစားထိုး ကူသဖို့အတွက် အလှူရှင်ပေါ်လာရင်တော့ သက်တမ်းစေ့တဲ့ထိ နေနိုင်မှာပေါ့ ... အဲ့အကြောင်း ဆရာဝန် ရဲ့ သမီး မာယူ တယောက် သိသွားတဲ့ ဂျပန်ရိုးရာ ယုံကြည်မှုအတိုင်း လေးပွင့်ဆိုင် သစ်ပင်လေးကိုရှာကာ တာကူမာမခေါ်သွားဖို့ သူမနဲ့အတူ တာကူမာ တသက်လုံးနေဖို့ ဆုတောင်းပြုပါတော့တယ် .... တာကူမာ ကလဲ သူ့ကို ဘယ်တော့မှမခွဲသွားပါကြောင်း သူမနဲ့ပဲ အရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါ လက်ထပ်ယူမည်ဖြစ်ကြောင်း မာယူ ထံ ကတိပေးခဲ့တယ် ... ဒီလိုနဲ့ အသက်တွေကြီးလာတဲ့ အခါ တာကူမာ ရဲ့ ရောဂါ လက္ခဏာ က ဆိုးရွားလာပါတော့တယ် ... အမောမခံနိုင်ဘူး မပြေးနိုင်ဘူး ... အဲ့လိုနဲ့ပေါ့ .. သူတို့ အထက်တန်းကျောင်းရောက်တဲ့အခါ မာယူ ကို စိတ်ဝင်စားတဲ့သူတယောက် ပေါ်လာပါတော့တယ် ... တာကူမာ အတွက်လဲ နှလုံးအစားထိုးမှုအတွက် အလှူရှင်ပေါ်လာပါတော့တယ် ... အဲ့အခါ မာယူ သူ့အပေါ် နှစ်သက်လာတဲ့ ကောင်လေး အပေါ် စိတ်ရောက်သွားမလား ? နှလုံးအစားထိုးကုသဖို့အတွက် အလှူရှင်ပေါ်လာတော့ တာကူမာ တယောက် အသက်နှစ်ဆယ် မတိုင်ခင် သေမယ့်ဘေးက လွတ်သွားမလား ? ဆိုတာကတော့ '' I Give My First Love to You '' ဆိုတဲ့ ဇာတ်ကားလေးထဲမှာ ခံစားကြည့်ကြပါနော် ...
Rating အနေနဲ့ကတော့ IMDb မှာ 7.3/10 ရရှိထားတဲ့ ဇာတ်ကားလေး ဖြစ်ပြီး ကြည့်ရှုလို့ကောင်းမယ့် လူငယ် Drama ဇာတ်ကားလေးတစ်ခုဆိုတာတော့ အာမခံပါတယ် ... ကဲ အောက်က Link လေးထဲ ဝင်ပြီး download လုပ်ကာ အားပေးကြပါဦးနော် ..
Download on V.I.P Link ( 735MB )
Download on pcloud Link ( 735MB )
Drama Japan Manga Melodrama Romance School Tragedy Youth
Labels: Drama Japan Manga Melodrama Romance School Tragedy Youth
Han October 7, 2016 at 1:17 PM
တကယ်ငိုရတယ် ���� ဒါမှန်းသိရင် အစကတည်းကမကြည့်ပါဘူး ��
Han October 7, 2016 at 1:18 PM
Myanmar Asian TV Channel October 7, 2016 at 9:16 PM
ဟီးဟီး ... အားပေးမှုအတွက် ကျေးဇူးပါ